Indlela yokusebenzisa lesi sidakamizwa "Neotrizol" (amakhandlela)? suppositories ngokusebenzisa imfundo wathi izokwethulwa ngezansi. Futhi, kusuka mathiriyeli lo sihloko uzofunda kulokho kwenza lokhu izidakamizwa, yini izici esivela abakushoyo ngaye, iziguli yini ngandlela-side effects.
Amakhandlela Bheka "Neotrizol" imfundo okuyinto ebiyelwe ebhokisini elenziwe amakhadibhodi, unezithako ezisebenzayo ezifana miconazole nitrate, ornidazole, sulfate neomycin futhi prednisolone. Zitholakala e ibhamuza amaphakethe of 8 izingcezu.
Uyini lo mshini wezenzo zomuthi "Neotrizol"? Yokusetshenziswa Lithi kuyinto umenzeli elwa namagciwane okuyinto ine umphumela antifungal. Liveza umphumela asebenzayo ngokumelene amagciwane Gram-negative namagciwane igremu-HIV, lihlaba ku isakhiwo kanye amabhlogo amaprotheni zamagama.
Ukuphumelela lomuthi ngenxa ngezithako zawo.
-antibiotic Neomycin kuyinto into elingelakwaJuda iqembu aminoglycosides. He is asebenzayo ngokumelene amagciwane Gram-negative, futhi ubuye ngempumelelo kakhulu ngokumelene nezilwanyana ezincane Gram-HIV.
Ngemuva kokufaka isicelo neomycin izidakamizwa ngokushesha lingena singene isakhiwo amaseli esibangelwe igciwane, bese amabhlogo synthesis amaprotheni ezibalulekile ukuze ziphile.
Miconazole - iyi-ejenti antifungal ngoba impatho endawo candidiasis vulvovaginal. Lo msuka ngempumelelo liziphatha maqondana Candida vulvovaginalis.
Kepha prednisolone, lokhu zokwenziwa corticosteroids. It isetshenziswa kukunciphisele izimpawu ezihlukahlukene ukuvuvukala. Lo msuka uyakwazi zivimbela ukukhiqizwa futhi ukukhululwa kwe balamuli ukuvuvukala. Iphinde kubambezela izinqubo proliferative njalo iyehlisa amathuba nezibazi.
Yini imingcele kinetic esivela izidakamizwa "Neotrizol"? kubika Guide ukuthi ukusetshenziswa ngezihloko ezihlukene lokuhlushwa ornidazole yayo emisipheni sangasese siphezulu kunamanye lokuhlushwa itholakala ngomjovo emthanjeni kanye nokuphathwa ngomlomo.
ukuchayeka lefundo emuthini abuzange. Ngemuva kokufaka isicelo amakhandlela neomycin lingena singene isakhiwo amabhaktheriya amaseli. Lokhu kwenzeka ngenxa ukukhiqizwa sithuthukiswe amaprotheni ongaphilile. Bona ukuvimba ukukhiqizwa izakhi zama-bacterium ezibalulekile ukuze ziphile.
Isicelo sendawo zomuthi kuphawulwe umsebenzi wayo omkhulu. Miconazole kuyinto ezinobuthi futhi ngokukhetha enza imvubelo isikhunta bohlobo lwe-Candida.
Kepha prednisone, lapho lusetshenziswa ngokwezihloko, kunciphisa kobukhulu izimpawu ukuvuvukala, kuhlanganise ngamanzi. kubika imiphumela yakhe letindzala abangu.
Kusukela lokho prescribers "Neotrizol" (amakhandlela)? Yokusetshenziswa uthi lokhu ukulungiselela ngenkuthalo esetshenziselwa ukwelapha izifo gynecological, njenge:
lezinkinobho of etiologies ezahlukene;
izifo okuxubile, kuhlanganise anaerobic ukutheleleka, Trichomonas, Gardnerella, isikhunta imvubelo-like, leptotriks.
Ukuze prophylaxis izidakamizwa kubhekwe isetshenziswa ngaphambi kokuba sihlinzwe ezibangela izifo zabesifazane, kanye magciwane lwesitho sangasese sowesifazane ngaphambi isisu noma ukulethwa, ngaphambi nangemva ukusetshenziswa intrauterine diathermocoagulation umuthi erosions wesibeletho phambi survey intrauterine.
Yiziphi Izimo izidakamizwa has "Neotrizol"? Ukufundiswa kuthi uvala ukusetshenziswa kwaleli thuluzi, akukho kakhulu. It is hhayi kuboniswe kuphela uma hypersensitivity lesiguli ketshezi izidakamizwa.
Amakhandlela Bheka "Neotrizol": isitatimende
Izibuyekezo ngalokhu odokotela izidakamizwa ukubika ukuthi kufanele injected ezijulile sangasese e inani ikhandlela elilodwa ebusuku. Ngemva kokwenza lokhu inqubo, isiguli kufanele babe sesimweni lisalele amahora ¼ (kungaba isikhashana).
Isikhathi isilinganiso yokwelapha nale ejenti izinsuku ezingu-8. Esesikhathini, ukwelashwa awuzange uphazanyiswe.
Kufanele kuphawulwe ukuthi, emva ukunyamalala zonke izimpawu amaphilisi isicelo lwesitho sangasese sowesifazane kufanele kuqhubeke umthamo ofanayo (nokuvalwa ephelele Yiqiniso).
Uma ungazange gone emva kwezinsuku 8, izimpawu zesifo, kufanele uxhumane wezifo zabesifazane yakho. Ngemva wokuhlola kanye inhlolovo Uchwepheshe angabeka kabusha ukuphathwa ne-ejenti efanayo.
Njengoba ukusetshenziswa prophylactic zomuthi "Neotrizol"? Ukufundiswa uthi izidakamizwa liyasetshenziswa izinsuku 8 nokuvimbela izifo gynecological.
Njengoba "Neotrizol" kufanele inikwe suppositories lwesitho sangasese sowesifazane? Imiyalelo iqukethe iziqondiso ezilandelayo ukuze isenzo:
Ithebhulethi sowesifazane sangasese ku nokokuyifaka afakiwe.
Gxila the nokokuyifaka nedivaysi emanzini abilisiwe kokuba lokushisa 30-40 degrees (imizuzwana embalwa).
kuholele ngokucophelela nokokuyifaka nedivaysi esithweni sowesifazane (ngangokunokwenzeka), elele emhlane wakhe.
Uma inqubo yenziwa, le nokokuyifaka esuswa sangasese, ukuqaqa kwawo izingxenye futhi kahle wageza ngamanzi afudumele anensipho. Ngaphezu kwalokho, idivayisi omisiwe ekamelweni lokushisa, eqoqwe futhi asetshenziswa nezinye izinjongo.
Ingabe izidakamizwa side effects "Neotrizol"? Manual ithi leli thuluzi non-enobuthi. It akakubangeli sensitization.
Imithi kahle ikubekezelele zonke iziguli. Kakhulu akuvamile kungabangela amajaqamba futhi ubuhlungu bekhanda nokuluma komzimba, ukucasuka esivuthayo, isifuba kanye nesimungumungwane esikhumbeni.
Kuyadingeka ukuba ayeke ekusetshenzisweni kwamakhandlela uma hypersensitivity kuya izingxenye zalo noma ukuluma kwesikhumba kwenzeka.
ekusebenzisaneni emtholampilo abalulekile "Neotrizol" izidakamizwa nezinye izidakamizwa aye atholakala. ukumuncwa lefundo ka prednisolone ukuba kucatshangelwe nge inqubo eqinile wendawo ukuvuvukala.
Lapho usebenzisa i-corticosteroids letindzala kudinga nokuqapha njalo isiguli nge ukuhluleka kwenhliziyo, ukukhumuzeka kwamathambo, iziyaluyalu ezinzima ngokomzwelo, isifo sofuba, isifo sikashukela, myopathy, ukufiphala kwamehlo ukwehluleka hepatic, wokugaya ukudla ipheshana isilonda, isithuthwane isilethikusebenza kanye hypothyroidism.
Naphezu kweqiniso lokuthi lesi sidakamizwa "Neotrizol" isetshenziswa endaweni, ukumuncwa yayo letindzala kungenzeka uma ukuvuvukala sangasese.
Ngokucophelela okukhulu suppositories lwesitho sangasese sowesifazane kufanele sinikezwe abantu nesifo non-ethize, myasthenia gravis, le anastomosis entsha enteric futhi diverticulitis.
Abesifazane abakhulelwe, nabancelisayo nezingane izidakamizwa akukashicilelwa.
Izibuyekezo Iningi mayelana amakhandlela "Neotrizol" akhayo. Iziguli bathi izidakamizwa ikhuthaza ukwelashwa okusheshayo izifo ezihlukahlukene izifo zabesifazane. Ivame ukutholakala engabelwe lezinkinobho futhi vaginosis virus. Futhi, lolu izidakamizwa ngempumelelo ephatha ukutheleleka okuxubile.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi iziphi amaphilisi lwesitho sangasese sowesifazane "Neotrizol". Imiyalelo, amazwana ngazo zichazwe lesi sihloko. Ochwepheshe batusa ukusetshenziswa lokhu umuthi. Kufanele isetshenziswe kuphela sikadokotela wezifo zabesifazane.
Isithombe kwabanikazi bamazwe enkondlweni "Dead Imiphefumulo" (bheka ithebula). Izimpawu kulendawo enkondlweni, NV Gogol
Ihhotela Begonia Nha Trang Ihhotela, Nha Trang ukubuyekeza, izici, izincazelo kanye nokubuyekezwa